? ? ? Ketchup Matte Liquid Lipstick ရဲ့ အရောင် ၅ ရောင်ထဲက ဘယ်အရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးလဲ.... (အကုန္လုံးက မတရားလွေနေတာ့ ရွေးရခက်ကြီး☺) 1. Chocolate 2. Pasta 3. Ketchup 4. BBQ 5. Burger ? ? ? KetchupLiquidLipstick ?တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်? Made In Korea မှာယူချင်တယ်ဆို cb လာနော်? 09962863580 #KetchupLiquidSlipstick #FullyPigmented #SafeLip Crd ***
ဖျက်ရခက်တဲ့ မိတ်ကပ်တွေအတွက် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue က တာဝန်ယူပါစေ ? ❤️ အသားအရေကို ထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိစေမယ့် Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Tissue မှာပါဝင်တဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးများက ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
Coming Soon !!!! မကြာမီ Focus Beauty ချစ်သူတွေအတွက် ရောက်လာတော့မယ်နော်. . .
အမြုပ်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ သက်တောင့်သက်သာပဲ ရေစိုခံမိတ်ကပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်. လုံး၀ ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘူးနော်. Ketchup Makeup Remover Bubble Tissue အရွက် ၃၀ပါ တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ်၊ အရွက် ၁၀၀ ပါ တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်.